Ingwenya ihamba njani ngaphambi kokuzala?
Ukuhamba kwiplagi ye- mucous yi-harbinger yokuqala komsebenzi. Ngoko ke, abafazi abangakaze bazalwe, bahlala bebuza malunga nendlela ekhangeleka ngayo nendlela umkhombe uhamba ngayo ngaphambi kokuzala.
Iyintoni iplagi encinane?
Ngokukhawuleza xa ukhulelwe, umzimba womfazi uqala ukuvelisa i-hormone ekhuthaza ukuveliswa kwe-muscus ekhethekileyo ngeengqungquthela zesisu, esiqokelela kwisitya, senza isikhomba, esenza umnyango wesibeleko.
Le ndlela, ebekwe yendalo, yenzelwe ukubonelela ngokukhuselekileyo kwintsholongwane evela kwizifo ezahlukeneyo ezinokungena ngaphandle, ngexesha lokukhulelwa.
Xa ukuzalwa kusondela, i- cervix iyancishiswa kwaye ihlanjululwe, kunye nomzimba wesifazane okhulelwe ulahla iplagi yokukhupha ukukhupha i-outlet yengane.
Iimpawu zebhanki elimnyama ngaphambi kokuzalwa
Ukuhamba kwiplagi ye-mucous ngaphambi kokunikezelwa kungenziwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Kuloo mntu ihamba ngokukhawuleza kwaye iyafana ne-big slimy lump. Kule meko, ukuphuma kwiplagi ye-mucous phambi kokunikezelwa akunakuphelelwa.
Omnye akayi kukhawuleza i-iplagi ngokukhawuleza, kodwa kwiindawo kwaye le nkqubo isetyenziselwe iintsuku eziliqela. Ulwabiwo ngexesha elifanayo lifana ne-mucus elula. Ngoko ke, ukuba uzama ukuphendula umbuzo weendlela ezininzi zokuhamba kweemoto ezishiya ngaphambi kokunikezelwa, kunzima ukuphendula impendulo, kuba kwelinye imeko le nkqubo inokuhlala iveki, kwaye enye ingenzeka kwimizuzu emibini.
Ukongezelela, kwenzeka kwakhona ukuba owesifazane okhulelweyo akaqapheli ukwahlula kweplagi (umzekelo, ukuba kwenzeka ntoni ngexesha lokuhlamba), okanye iplagi iyahamba xa ukuzalwa sele kuqalile - kunye ne-amniotic fluid.
Njengomthetho, ikhenkethi ebhinqileyo abakhulelweyo iyahamba ngexesha lokunyuka kwelanga kwindlu yangasese, okanye xa ihlamba. Ngeli nqanaba, ibhinqa inokuvakalelwa kukuba into ethile iphuma kumfazi. Xa uphuma kwiplagi ye-mucous ngexesha apho umfazi egqoke, okanye ngexesha lokulala, unokubona umxube wokukhutshwa kwamanqatha kwindawo yokuhlamba okanye iphepha. Ngamanye amaxesha ikhenkco isuswa emva kokuhlolwa ngugqirha.
Ngomzuzu apho iplagi yinyumba ihlala yodwa, umfazi unokuzizwa elula emlonyeni wesisu.
Ukuba ikhenkco iyahamba ngokupheleleyo, iya kufana ne-jelly, isiqwenga se-silicone okanye i-jellyfish. Xa uphuma kwiindawo, kufana neenyanga, kodwa kuninzi kakhulu ekuhambeni.
Umbala we-mucus unokuhluka - kwaye ubala, kwaye uluhlaza kwaye unobomvu. Ngokuqhelekileyo liqhakazile ngeemvini zegazi. Ubuninzi bokungeniswa kwegazi kwi-plug mucous kubangelwa ngenxa yokuba xa ulungiselela umlomo wesibeleko ukuhanjiswa kwendawo kunye nokuvula kungabhubhisa iinqanawa ezincinci, igazi eliphuma kulo umfazi, kwaye kukho idibanisa ne-stopper.
Ukuba isikhomba sinombala oluhlaza, ke oku kubonisa ukuba umntwana ufumana ubunzima be-oxygen. Kule meko, kufuneka uye esibhedlele kwangaphambili.
Isizathu sokuba kubiza ugqirha kwakhona kusasa kakhulu ekuhambeni kwenkomo - ngaphezu kweeveki ezimbini phambi komhla wokulindela wokuziswa; okanye ukuvela kwegazi emva kokuphuma kwiplagi ye-mucous.
Ukuba umkhombe ushiye ngaphambi kokuba uhambise ngexesha elifanelekileyo kwaye ube nombala oqhelekileyo, oku kuwuphawu lomhlangano osondeleyo kunye nosana, kodwa oku akuthethi ukuba ukuzalwa sele kuqalile kwaye kuyimfuneko ukuthatha izinto ezinxamisekileyo. Esi siganeko sizathu sokuhanjiswa kwexesha, kwakhona kwakhona ukujonga ukuba yonke into ilungiselelwe uhambo oluya esibhedlele kunye neentsuku zokuqala zobomi bentsana. Kwimeko nayiphi na into, ungakhathazeki kwaye ulinde ngokukhawuleza ukulwa, okungaqala kwiintsuku ezi-2-7 ezilandelayo.
Ukungasebenzi kakuhle - njani ukuphepha iingxaki ezinzulu?
I-Cream yamanqaku alula emva kokubeleka
Ukulungelelanisa isigaba sokugcina
Ndiyakwazi nini ukupompoza i-press emva kwe-carean?
Izikhefu ngexesha lokunikezelwa
Iingxaki emva kwecesarean section
Ukuphinga emva kokubeleka
Ukuzalwa okwesibini kulula kunokuqala?
Iintlukwano ngaphambi kokubeleka - nini ukuya esibhedlele?
Amanzi ashiya njani abafazi abakhulelweyo ngaphambi kokuba babele, kwaye nini ixesha lokungena esibhedlele?
Nini ukuya esibhedlele?
Ngaba kunokwenzeka ukubeletha emva kokuvala?
UVanga uphupha ntoni?
Ukuthabatha i-mackerel ngeengcezu kwi-brine
Izicathulo zeFashion - ekwindla ngo-2014
I-artichoke yaseJerusalem - izakhiwo ezincedo
Ukwahlula ubuntu - iimpawu
I-chlorogenic acid ilungile kwaye imbi
I-petrol wheel trimmer
Isitayela somntu - iifoto ezingama-66 zemifanekiso ethembisayo nganye
UBon Pitt udibana noSienna Miller
Umfazi weCapericorn kunye neGemini Mfazi-Ukuhambelana
Ikhononut ilungile kwaye imbi
Itayi nge cognac
Izicathulo ze-semi-seminyaka zenkwenkwana - kufuneka yini ukwazi xa uthengela izicathulo zomntwana?
Imilenze yenkukhu kunye namazambane kwi-oven - zokupheka ezimnandi kwiidlo ezinomdla kuzo nayiphi na itafile
Yintoni i-fortune tellser about?
Izidlo zabapheki be-induction - njani ukungenzi iphutha ekukhethweni?
Indlela yokuphumelela indoda intombi?